Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo si adag uga hadlay xaaladda Paul Pogba… (Muxuu yiri?) – Gool FM
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo si adag uga hadlay xaaladda Paul Pogba… (Muxuu yiri?)
(Manchester) 10 Luulyo 2019. Macallinka kooxda Manchester United ayaa si adag uga hadlay xaaladda Paul Pogba ee kooxda isagoo digniin u diray kooxaha doonaya laacibkan ee Real Madrid iyo Juventus.
Laacibka khadka dhexe ee reer France, Paul Pogba waxaa ka go’an inuu isaga tago xagaagan kooxda Manchester United, waxaana uu ka hadlay baahida uu u qabo inuu meel kale ka bilaabo tartan cusub.
Yeelkeede, waxaa intaas dheer in walkiilka ciyaaryahan Paul Pogba ninka la yiraahdo Mino Raiola ayaa horay u sheegay in Solskjaer iyo kooxduba ay ka warqabaan inuu ciyaaryahanku doonayo inuu tago.
Si kastaba ha ahaatee, macallin Solskjaer oo saxaafadda kula hadlay Perth ee dalka Australia, halkaasoo ay kulan saaxiibtinnimo ay Sabtida kula ciyaari doonaan kooxda Perth Glory ayaa sheegay in Man United aysan ku qasbanayn inay iibiso Pogba, isla markaana aysan jirin dalabyo laga soo gudbiyay Koobka Adduunka ku guuleystay.
“Waxyaabo badan ayaa jiray oo ciyaartooydeenna laga sheegayey, haddii ay ahaan lahayd kuwa imaanaya ama kuwa baxaya, balse aniga ahaan shaqadu waa sideedii” ayuu hadalkiisa ku bilaabay macallin Solskjaer.
“Manchester United marka aad joogto waad filan kartaa inay wararkaan oo kale soo baxaan, waan la hadlay Pogba, Lukaku, Rashford iyo Lingard, inta badan ciyaartoyda waan la hadlay sababtoo ah waa inaan xiriir joogta ah la sameeyo.”
“Ciyaartoydeenna wax dalab ah lagama soo gudbinin, sidaas awgeed marka Pogba laga reebo ciyaartoyda intooda badan waxa ay ku joogaan heshiis wakhti dheer ah, waxaan nahay Manchester United, kuma qasbanin inaan ciyaartoy iibino.”
“Paul waa xirfadle aad u wayn, waxa uu leeyahay qalbi dahabi ah, Paul marnaba kooxda iskama saaro, mar walba dadaalkiisa ugu fiican ayuu ku bixiyaan, wax intaas ka duwan kama sheegi karo, waxaa jira wakiil iska hadla mar walba, sida aan sheegay ma jiro dalabyo la soo gudbiyay, sidaasi darteed waa intaas inta aan sheegi karo.”
“Paul marnaba walaac kama qabin, si adag ayuu u shaqeynayaa, waa xirfadle dahabi ah, sidaas awgeed, jawaabteennu waa isku mid.”
“Inta aan halkaan soo fariisto kama hadli karo kaliya Paul Pogba iyo wax ay wakiilladu sheegayaan, sanado yar ayaa uga haray heshiiskiisa, waxaana uu ahaa mid cajiib ah.”
Wareegga siddeed dhammaadka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019 oo caawa daaha laga rogi doono iyo Saacadaha la ciyaari doono
RASMI: Kooxda AC Milan oo soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad ee ay ku ciyaari doonto fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20